ဗမာပြည်က ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆိုတာ .. ဖက်ဆစ်တစ်ယောက်၊ ဗိုလ်ချူပ်လေးယောက်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုခေါ်တာတဲ့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Empires always dig their own graves
ဦးဝီရသူ၏ လှို့ဝှက်ချက်များ ( Pa Yit) »
ဗမာပြည်က ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆိုတာ .. ဖက်ဆစ်တစ်ယောက်၊ ဗိုလ်ချူပ်လေးယောက်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုခေါ်တာတဲ့
ဗမာပြည်က ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆိုတာ …
ဖက်ဆစ်တစ်ယောက်၊ ဗိုလ်ချူပ်လေးယောက်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုခေါ်တာတဲ့
တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ဟောင်း ဒေါက်တာအေးမောင် ရဲ့ ဘေးမှာ ၀န်းရံနေသူတွေကို ကြည့် လိုက်တာနဲ့တင် ဒေါက်တာအေးမောင်ဟာ ကိုယ့်လူတွေကိုသာ သာစေ၊ သူများတွေကိုတော့ နာစေ လို့ အယူရှိတဲ့ ဖက်ဆစ် လူမိုက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှား နေပါ တယ်။
ဒီလိုလူကို ခြောက်ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲအတွက် လက်ရှိစစ်အုပ်စုရဲ့ ကစားကွက်ဖော်မှုတွေနဲ့ အတူ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ရယ်စရာပါ။ ရွေးတဲ့ပုံ က လည်း လျှိူ့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ဆိုပဲ။ လျှိူ့ဝှက် ဆိုမှတော့ ဘယ်သူကမှ ဘာမှကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လည်း သိခွင့်မရဘူးလေဗျာ။ နော။
ဒီဓာတ်ပုံအရ အေးမောင်ဆိုသူရဲ့ ဘေးကို ကပ်ပြီး ကာကွယ်ဝန်းရံနေသူတွေဟာ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်လိုလို ၀င်ပြီး ထိုးဖောက်ပါဝင်ထားခဲ့ပြီး နောင်မှာ အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ရခိုင် ဖက်ဆစ် ရဲမင်းဦး။ နောက်ပြီး မွတ်စလင်မ် တွေ ဘာသာခြားတွေကို မောင်းထုတ်ရမယ်လို့ စည်း ဘောင်မရှိ၊ ဗဟုသုတမရှိ နေရာတိုင်းလိုက်လံအော်ဟစ်နေသူ တောင်ဒဂုန်က ရခိုင်ဖက်ဆစ်ဘုန်း ကြီး ဦးပါမောက္ခ( ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကွယ်အကာယူထားပေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးမဟုတ်) တို့ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဒီနေ့ထိ လူပေါင်းများစွာသတ်ဖြတ်ခံရပြီး လူပေါင်း တစ်သိန်းခွဲကျော် မိမိတို့အိုးအိမ်တွေကို ပြန်ခွင့်မရဘဲ ဒုက္ခသည်စခန်း ဆိုတဲ့ တိရိစ္ဆာန်သာသာ နေရာတစ်ခုမှာ မသေ သေအောင် ပစ်ထားခြင်း ခံရတဲ့ အဓိက တရားခံတွေထဲမှာ ဒီ အေးမောင်ဆိုသူဟာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်နေသူပါ။
အေးမောင်လို လူက ပြောရေးဆိုခွင့်ဝေစု တစ်ပုံ၊ အရင်စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ဟောင်း လူညစ်ပတ် ဗိုလ်ချူပ်မှုး ကြီးသန်းရွှေ ရဲ တပည့်ဟောင်း လက်ရှိသမ္မတ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန်က ဝေစုတစ်ပုံ၊ သန်းရွှေရဲ့ တပည့်ဟောင်း လက်ရှိ စစ်တပ်(တပ်မတော်) ရဲ့ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောရေးဆိုခွင့် ဝေစုတစ်ပုံ၊ သန်းရွှေရဲ့ တပည့်ဟောင်း ယနေ့အမျိူး သား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဆို သူ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးဟောင်း ရွှေမန်းက ကိုယ်စားပြုပြောရေးဆိုခွင့် ဝေစုတစ်ပုံ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုသူ ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီးဟောင်း သန်းရွှေရဲ့ ငယ်မွေး ခြံ ပေါက် ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့် ဆိုသူက ပြောရေးဆိုခွင့် တစ်ပုံ နဲ့ နောက်ဆုံးကျန် တဲ့ တစ်ပုံကိုတော့ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူကြားလို့ကောင်းရုံ ပေးထားပါတယ်။
ဒါကို ခြောက်ပွင့်ဆိုင်လို့ခေါ်တာလားဗျာ။ ရယ်စရာတွေတော့ မလုပ်ကြနဲ့ဗျာ။ ဒါဟာ ပွဲမကစား ခင်ကတည်းက ၅ဂိုး ၁ဂိုး နဲ့ ရှုံးနေအောင် ဗျူဟာချထားတဲ့ ပွဲသက်သက်က လွဲပြီးဘာများ ထူးဆန်း နေလို့လဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၈နှစ်တုန်းက ညောင်နှစ်ပင် မှာ ကြိတ်ဝိုင်းဖွဲ့တဲ့ အမျိူးသားညီလာခံ အတုကြီးကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိူးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် က သပိတ်မှောက် ထွက်သွားခဲ့တာ လည်း ဒီလိုအကွက်နဲ့ အချူပ်ခံခဲ့ရလို့ပဲ မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။
နှစ်တွေသာကြာသွားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်တုန်းက အကွက်ဟောင်းတွေအတိုင်းပဲ ဘာမှ လည်း မပြောင်းလဲဘဲနဲ့ ဒီနေ့ ခြောက်ပွင့်ဆိုင်ဆိုပြီး လုပ်ချပြလာပြန်တယ်။ ဒါကိုမှ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ခေါင်းခါခါ၊ လည်ခါခါ ၊ အပြုံးပန်းတဝေေ၀ နဲ့ အဟုတ်ကြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မယ် ဆိုရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပေးထားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နို ဘယ်လ်ဆု ဆိုတာကို ပေးထားတဲ့သူများ ပြန်ပြီး သိမ်းဆည်းစေ့ချင်တယ်။
အဲ့လောက်တောင် ညံ့ဖျင်းသူကို ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး ခေါင်းဆောင်ကြီးအမှတ်နဲ့ ကိုးစား ယုံကြည်လာခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုတော့ အညံ့ဆုံးစာရင်းထဲ ထိပ်ဆုံးက ထည့်လိုက်ပါ့မယ်။
ဓာတ်ပုံ – တိုင်ပြည်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသည့် စစ်မှန်သော ဒီ မိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ယနေ့ မဖြစ်မနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရမည့် ခြောက် ပွင့်ဆိုင် (သို့) ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသူဆိုသူ ကိုယ်စားလှယ်ခြောက်ဦး၏ ဓာတ်ပုံ။
This entry was posted on November 28, 2014 at 12:39 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.